Vaovao - VARIETY LEHILAHAM-BOLA Vokatra GARLIC, INDRINDRA NAMPIASAIN'NY MPAMBOLY TANY, IZAO AZONAO AZO AMIN'NY FARM AGR FARM STOCK
VARIETY LEHIBE PRODUKAR GARLIC FARM, INDRINDRA IZAY NAMPIASAIN'NY MPAMBOLY TANY, IZAO AZONAO AZO ATAO AMIN'NY AGR FARM STOCKS
Ny AGR Garlic Farm, nalaza tamin'ny tolo-kevitr'ireo tian'ireo mpanjifa eo an-toerana, dia namboly tongolo lay an-tanety nandritra ny taona maro. Ny orinasa mpijinja dia mamorona vokatra voapoizina tongolo gasy maro manomboka amin'ny tongolo gasy vaovao ka hatramin'ny vovoka tongolo lay.
AGR Garlic Specialist, manager Wendy Chen, dia faly fa nanaiky ny hametraka ny vokatr'izy ireo ny Garlic Farm. Nilaza i Wendy fa: "Ny vokatra AGR Garlic Farm dia miavaka any avaratr'i Sina. Tsy misy olon-kafa mamatsy vokatra isan-karazany toy izany. Alohan'ny nanambaranay ny fahatongavan'ireo tahiry teo amin'ny tsena teo an-toerana dia efa namidinay avokoa izay rehetra ananantsika. Mahatalanjona ny valiny nomen'ny mpanjifa mahazatra anay. Azoko antoka fa afaka manome soso-kevitra ny tongolo lay aho. ”
Ny vokatra AGR Garlic Farm dia namboarina miaraka amin'ny takamoa tongolo gasy vaovao, karazana akanjo vita amin'ny tongolo lay, vovoka tongolo lay, granula tongolo lay, ary menaka tongolo lay.
Crisp Xu, Tale ary mpiara-manorina ny AGR Garlic Farm, dia nilaza fa, "Raha nanatona anay ny tantsaha hafa mba hijery raha afaka manondrana ny vokatr'izy ireo izahay dia faly afaka nanampy.
“Tsy dia manana tongolo lay betsaka amin'ny vokatray izahay ary faly mandre fa mankafy ny elanelana misy ny mpanjifa any ivelany. Mpanondrana monina any amin'ny hektara marobe izahay, izay mazoto hiambina ny lazanay, ny fiaraha-miasa amin'ireo faritra ambanivohitra dia mifanentana tanteraka amin'ny fari-piainanay. ”
Raha mila antsipiriany bebe kokoa momba ny AGR Garlic Farm sy ny vokatra isan-karazany azafady tsidiho ny tranokala: www.primeagr.com. Ireo vokatra Garlic Farm dia tsy misy afa-tsy amin'ny tahiry vonona hamidy sy halefa am-baravarana miaraka amin'ny ekipa mpivarotra faran'izay tsara amin'izao fotoana izao.
Eo afovoan'ny AGR Garlic dia fanoloran-tena amin'ny fomba fiainana biolojika. AGR Garlic Farm dia mizaka tena ary tena 'saha amin'ny lovia' miasa amin'ny fenitra farany ambony amin'ny faharetana. Ny fampiasana ny fomba fambolena maharitra indrindra AGR mirehareha amin'ny fanandramana ambony ny vokatra paoma vaovao avy any ambanivohitra kilasika Aziatika. Ny orinasa mpamboly biolojika dia miitatra amin'ny toeram-pambolena roa ary nitombo efa ho an'arivony hektara. Voanjo, paoma, tongolo ary tongolo lay, rehefa novolena, no nobeazina teny amin'ny toeram-piompiana. Ny AGR Farm dia mitahiry ny vokatra ambanivohitra miovaova indrindra amin'ny mpamatsy ao an-toerana ka hatrany amin'ny importra any ivelany.
Ny isan'ny vokatra AGR Garlic Farm izay aseho amin'ny sary dia azo zahana amin'ny www.primeagr.com.